Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण कार्यकाल सकिने बेला देउवाको अनौठो दाउ !
१७ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०७:५६
काठमाडौँ, १७ फागुन । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल सकिन केहि दिन मात्र बाँकी छ । देउवाको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुन १९ गते सकिँदैछ। तर कार्यकाल सकिने बेला देउवाले सक्रियता बढाएका छन् । महाधिवेशन भएको केही महिनापछि गठन गर्नुपर्ने विभागलगायतका सांगठनिक कामहरु बल्ल सुरसार गरेका छन् । अर्को वर्ष फागुन ७ देखि १० गतेसम्म पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गर्ने गरी एक वर्ष केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप गरिएको छ । सोमबारसम्म पार्टीको केही विभाग गठन गर्नेदेखि केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने तयारी सभापति देउवाको छ ।
पार्टी १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका बेला सभापति देउवा आफूनिकट नेताहरुलाई पार्टीमा भूमिका दिने गरी अन्तिम समयमा विभाग गठन गर्न लागेका हुन् । उनले शुक्रबार अपरान्ह वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई टेलिफोन गरेर विभागमा बस्ने नेताको नाम दिन आग्रह गरे । तर नेता पौडेलले भने अधिवेशन गर्नुपर्ने बेला विभाग गठनको औचित्य नरहेको भन्दै सभापति देउवालाई विभागमा बस्ने नेताको नाम दिन अस्वीकार गरेका थिए । ‘अब विभाग किन चाहियो? अधिवेशनमा जुट्नुपर्ने बेलामा विभाग गठनको कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ पौडेलले देउवालाई भने, ‘विधान अनुसार ६ महिनाभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भन्नेछ । तर अहिलेसम्म गर्नुभएन । अब विभाग गठनको आवश्यकता छैन ।’
कांग्रेसमा विधान अनुसार विभाग संख्या २८ रहेकोमा सभापति देउवाले ४७ पुर्‍याएका छन् । विभाग गठनका लागि कांग्रेसमा पटकपटक छलफल हुँदै आएको छ । सभापति देउवाले सोमबारसम्म केही विभाग गठनको तयारी अगाडि बढाएका छन् । उनले विभागमा बस्ने नेताहरुको अन्तिम सूची तयार गर्न आफूनिकट केही केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मा दिएका छन् । ‘केहि दिनभित्र प्रचार, जनसम्पर्क, संगठन विभागलगायत गठन गर्ने तयारी छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘बाँकी विभाग पनि चाँडै टुंगो लगाइनेछ ।’ यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।